ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာအချက်အလက်များ | MYNFREL | Myanmar Network Organization for Free and Fair Elections (MYNFREL) | Page 4
09263215643 No.162, 4th Floor (R), Bogyoke Aung San Rd, Pazundaung Tsp. Mon - Fri , 9:00 AM - 5:00 PM
MYNFREL မှ ပါဝင်ဖြေကြားပေးထားသော ကြားဖြတ်​​ရွေး​ကောက်​ပွဲသတင်း – VOA
Posted By: MYNFRElon: ဇနျနဝါရီ 19, 2019 In: News, ကွားဖွတျရှေးကောကျပှဲ, အခကျြအလကျမြား
ဗွီအိုအေ ရေဒီယိုအစီအစဉ် တိုက်ရိုက် ထုတ်လွှင့်မှု အောက်တိုဘာလ ၃၁ ရက် ဗုဒ္ဒဟူးနေ့မနက် ၆း၀၀ နာရီ မှ ၇း၀၀ နာရီ ဗွီအိုအေရဲ့ ဗုဒ္ဓဟူးနေ့မနက်ခင်း ရေဒီယိုအစီအစဉ်ကို ရေဒီယိုကနေ ထုတ်လွှင့်ချိန်နဲ့ တပြိုင်နက်ထဲမှာပဲ Facebook ကနေလည်း တိုက်ရိုက် ထုတ်လွှင့်ပေးနေ... Read more
ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲအကြောင်းသိကောင်းစရာတွေကို တိုက်ရိုက်ဆွေးနွေးပေးသွားမယ့် ဘီဘီစီမြန်မာပိုင်းရဲ့ Friday Live အစီအစဉ်စတင်နေပါပြီ။
Posted By: MYNFRElon: ဇနျနဝါရီ 19, 2019 In: News, သတငျး, အခကျြအလကျမြား
မနက်ဖြန် နိုဝင်ဘာ ၃ ၇က်နေ့မှာ NLD ပါတီဦးဆောင်တဲ့ အစိုးရသက်တမ်းအတွင်း ဒုတိယအကြိမ် ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲကို ကျင်းပတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ အခုလာမယ့် ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲမှာ လစ်လပ်နေတဲ့ မဲဆန္ဒနယ် ၁၃နေရာအတွက် ပါတီအသီးသီးက ကိုယ်စားလှယ်လောင်းတွေနဲ့ တသီးပုဂ္ဂလက... Read more
ရေဖြူမြို့ Community Centre ၌ ၂၀၂၀ တွင် ပထမအကြိမ်မဲပေးမည့် လူငယ်များအတွက် နိုင်ငံသား အသိပညာပေး သင်တန်း ဖွင့်လှစ်
ရေဖြူ အောက်တိုဘာ ၂၇ တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး၊ ရေဖြူမြို့နယ် ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်နှင့် Myanmar Network Organization for Free and Fair Elections (MYNFREL) တို့က ပူးပေါင်း၍ ၂၀၂၀တွင် ပထမအကြိမ် မဲပေးမည့်လူငယ်များအတွက် နိုင်ငံသားအသိပညာပေး သင်တန်းဖွင့်ပွဲ... Read more
ရှမ်းပြည်နယ် (အရှေ့ပိုင်း)၊ ကျိုင်းတုံခရိုင်၊ မိုင်းပျဉ်းမြို့တွင် Myanmar Network Organization for Free and Fair Elections (MYNFREL) အဖွဲ့သည် “ ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်တွင် ပထမအကြိမ် မဲပေးကြ မည့် လူငယ်များအတွက် နိုင်ငံသား အသိ ပညာပေးသင်တန်း” ကို ဇန်နဝါရီ ၇ ရက်၊ နံနက် ၉နာရီက ဇေယျာသီရိခန်းမ၌ ပြုလုပ်ခဲ့သည်။
Posted By: MYNFRElon: ဇနျနဝါရီ 18, 2019 In: News, သတငျး, အခကျြအလကျမြား
ရှမ်းပြည်နယ် (အရှေ့ပိုင်း)၊ ကျိုင်းတုံခရိုင်၊ မိုင်းပျဉ်းမြို့တွင် Myanmar Network Organization for Free and Fair Elections (MYNFREL) အဖွဲ့သည် “ ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်တွင် ပထမအကြိမ် မဲပေးကြ မည့် လူငယ်များအတွက် နိုင်ငံသား အသိ ပညာပေးသင်တန်း” က... Read more
Posted By: MYNFRElon: ဇနျနဝါရီ 18, 2019 In: News, သတငျး
မိုင်းခတ်၌ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာအသိပညာပေးသင်တန်းဖွင့်လှစ်မိုင်းခတ် ဒီဇင်ဘာ… Posted by IprdMong Khat on Thursday, December 6, 2018 Read more
ဒုတိယနုိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ၁ ဦးခန့်အပ်
Posted By: PlanetCreatoron: နိုဝငျဘာ 07, 2018 In: Uncategorized
ဧရာဝတီ၊ ဧပြီ ၅၊ ၂၀၁၆ ဦးကျော်တင်ကို နုိုင်ငံခြားရေး ဒုဝန်ကြီးအဖြစ် သမ္မတဦးထင်ကျော်က ခန့်အပ် တာဝန်ပေးလုိုက်ကြောင်း ယနေ့ ညနေပုိုင်းတွင် ကြေညာချက်ထုတ်ပြန်သည်။ ဧရာဝတီ၊ ဧပြီ ၅၊ ၂၀၁၆ ဦးကျော်တင်ကို နုိုင်ငံခြားရေး ဒုဝန်ကြီးအဖြစ် သမ္မတဦးထင်ကျော်က... Read more
အမျိုးသမီး လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ၆၄ ဦး
Posted By: PlanetCreatoron: စကျတငျဘာ 07, 2018 In: Uncategorized
အခုလက်ရှိ အမျိုးသားလွှတ်တော်နဲ့ ပြည်သူ့လွှတ်တော်မှာ ရွေးကောက်ခံလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ၄၉၁ ဦး ရှိတဲ့အထဲမှာ အမျိုးသမီး လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ၆၄ ဦး ပါဝင်ပါတယ်။ —– အခုလကျရှိ အမြိုးသားလှတျတျောနဲ့ ပွညျသူ့လှတျတျော ရှေးကောကျခံလှတျတျောကိုယျစားလှယျတှထေဲမှ... Read more
အတိုင်ပင်ခံ ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုင်ရာ ဥပဒေကြမ်းကို အတည်ပြု
Posted By: PlanetCreatoron: မတျ 07, 2018 In: News
နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဆိုင်ရာ ဥပဒေကြမ်းနှင့် ပတ်သက်ပြီး အမျိုးသားလွှတ်တော် အတည်ပြုချက်အတိုင်း အတည်ပြုရန် သဘောတူခြင်း ရှိ၊ မရှိ ပြည်သူ့လွှတ်တော်၌ အဆုံးအဖြတ် ခံယူရာတွင် တပ်မတော်သား လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ မတ်တပ်ရပ် ကန့်ကွက်ခဲ့သော်လည်း ထော... Read more
" ဒီမိုကရစေီစံနှုနျးမြားနှငျ့ ကိုကျညီသော ရှေးကောကျပှဲမြား ပုံမှနျ ကငျြးပနိုငျရနျ ကှနျရကျ ခြိတျဆကျ ဆောငျရှကျခွငျး "
" လှတျလပျ၍တရားမြှတသော ရှေးကောကျပှဲမြား ဖွငျ့ ဒီမိုကရစေီစံနဈထှနျးကားသော မွနျမာ နိုငျငံ "
အကြိုးအမွတျ မယူသော ရှေးကောကျပှဲဆိုငျရာ နိုငျငံသားမြားအား အသိပညာပေးခွငျး ၊ရှေးကောကျပှဲနေ့ နှငျ့ ရှေးကောကျ ပှဲစကျဝနျးအတှငျးရှိဖွဈစဉျမြားအား လလေ့ာစောငျ့ကွညျ့ခွငျးလုပျငနျးမြားကို လုပျဆောငျသူအဖွဈ ရညျတညျမညျ။
အခွားသော အရပျဖကျလူမှုအဖှဲ့ အစညျးမြားနှငျ့လညျး ပူးပေါငျးဆောငျရှကျမှုကိုမွှငျ့တငျမညျ။
အမြိုးသား၊ အမြိုးသမီး၊အသကျအရှယျ၊ ရုပျပိုငျးဆိုငျရာ၊ စိတျပိုငျးဆိုငျရာစသညျ ခှဲခွားမှုမရှိပဲ တနျးတူအခှငျ့အရေးရရှိစရေမညျ။
ဒသေတှငျး၊ နိုငျငံအတှငျးရှိ တိုငျးရငျးသား လူမြိုးစုမြား၏ အကြိုးစီးပှား နှငျ့ ဂုဏျသိက်ခာကို ထိခိုကျ နဈနာစခွေငျးမရှိစရေ။
မညျသညျ့အခါမြှ နိုငျငံရေးပါတီ အဖွဈ အသှငျ မပွောငျးပါ။
Federal Democracy Charter အောကျတိုဘာ 26, 2021
ရှေးကောကျပှဲနတှေ့ရှေိ့ခကျြ ကနဦးအစီရငျခံစာ အနှဈခြုပျထုတျပွနျခကျြ – နိုဝငျဘာလ၊ (၉) ရကျ၊ ၂၀၂၀ ပွညျ့နှဈ နိုဝငျဘာ 10, 2020
အားလုံးအကြုံးဝငျရှေးကောကျပှဲသတငျးစဉျ ကနဉီးအစီရငျခံစာ (နိုဝငျဘာလ၊ ၂၀၂၀ ပွညျ့နှဈ) နိုဝငျဘာ 7, 2020
သတငျးမီဒီယာလလေ့ာစောငျ့ကွညျ့သူကငျြ့ဝတျနှငျ့နညျးလမျးမြား ဇူလိုငျ 2, 2019
ရှေးကောကျပှဲဆိုငျရာ သတငျးမြား စုစညျးမှု (မလေ၊ ၂၀၁၉ခုနှဈ) ဇှနျ 25, 2019
All right Reserved. Copyright by MYNFREL 2018 Designed By World Wide Myanmar